Nezvedu - Ningbo Original Accessories Co., Ltd.
Ningbo Original zvishongedzo Co., Ltd.
CZ / AZ Series
CC / VC Series
CF / VF Nhevedzano
WDC / AZ
YAMATO Chekutanga accessories mupi
Isu tinonyanya kupa chiJapan YAMATO yakazara huwandu hwepakutanga A-kirasi accessories.
Ningbo Original Accessories Co., Ltd ikambani yekucheka midziyo inosanganisa indasitiri nekutengeserana. Iyo kambani yakavambwa neChen Jiali boka vane makore anopfuura gumi nemaviri vachitenga ruzivo muNingbo YAMATO Company. Isu takanyatsojeka nezve nzira dzekutenga dzeYAMATO .Pane zvinopfuura zviuru zvitatu zveYamato zvikamu mudura redu, Professional wholesale uye chitoro Japan YAMATO yekutanga yekusona zvinowoneka, uye zvinopa zvishongedzo kuna JUKI, SIRUBA, KINGTEX uye mumwe wekupedzisira-wekusonesa muchina. makambani.
Zvekutengesa uye zvekutengesa zvezvinhu zvekutanga: YAMATO
Wholesale yezvinhu zvekutanga: JUKI, PEGASUS, MUKOMA, SIRUBA, KANSAI, KINGTEX
"Kururama Kwakakura Kupfuura Kubhadhara" uye "Chete Tengesai Chekutanga Sewing Zvishongedzo"
Iyo kambani inonamatira kune iyo teneti ye "kururama kwakakura kupfuura purofiti" uye "chete tengesa zvekutanga zvekusona zvishongedzo", kushandira yakakwira-magumo ekusona zvishongedzo vatengi pasi rese. Isu tinogara tichiisa mhando pakutanga. Zvese zvinhu zvinozotariswa nevashandi vedu vekuongorora mushando vasati vaendeswa, uye vanozoendeswa chete kana mhando yacho yasimbiswa.
Mune ramangwana, tinotarisira kuita hushamwari nevazhinji vagadziri vepakutanga uye vatengi kubva kumba uye kunze kwenyika kuti vape sevhisi yekugadzira uye kushambadzira kwemashini ekupedzisira ekusona muindastiri. Panguva imwe chete, regai kambani yedu ive "Ningbo yokusonesa chiteshi", uye tinogamuchirwa kukambani yedu.
Mushure memakore anopfuura mashanu ekuenderera mberi nekuvandudza uye hunyanzvi, Ningbo Original Accessories Co, Ltd yave China inotungamira uye China-inozivikanwa mugadziri wekusona accessoreis. Mumunda wepamusoro-magumo wekusona accessoreis, Ningbo Original Co, Ltd yakagadza yayo inotungamira mhando uye mhando mabhenefiti.
Fekitori yedu inogadzira ese marudzi emhangura-aruminiyamu bhora musoro unobatanidza tsvimbo zvinhu
Isu takanangana neukukutu kwehomwe yega yega yemafuta, nguva dzese dzechikwiriso uye chikamu chega chega, kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvedu zvine hupenyu hwebasa rinopfuura makore matatu, uye zvakasimbiswa mukushandisa chaiko.Iyo yakafanana nemimwe michina. muJapan neTaiwan.Panguva imwecheteyo, isu tiri kuramba tichikudziridza matanda-ekupedzisira ekubatanidza matanda, kugadzirisa zvinhu uye maitiro ekusangana nezvakawanda zvinodiwa nevatengi. Mushure memakore ekushanda nesimba, isu takapa accessoreis kumakambani mazhinji emuchina wekusonesa ekuChina, uye ndokuveza mucherechedzo wedu pane yega tsvimbo yekubatanidza kupa vatengi dhigirii repamusoro rekuzivikanwa uye kutora mamwe mabasa.
Vatariri vedu vehunhu vakashanda mukambani yeYAMATO kwemakore gumi nematatu uye vanoziva nemaitiro ekuongorora ezvikamu zvakasiyana. Zvinhu zvese zvisati zvaiswa mukuchengeterwa nekuendeswa, zvinotariswa nevanoongorora zvemhando yepamusoro kuti vaone kuti zvikamu zvakanaka zvinoendeswa kune vatengi.Kana zvikamu zvacho zvisiri zvemhando yepamusoro, tinodzosera zvikamu zvacho kufekitori, uye tichava nechokwadi chekuti izvo zvikamu zvinotumirwa kumutengi zviri zvepakutanga uye zviri zvemhando yepamusoro.
Tinogona kupa dzinenge dzese YAMATO zvikamu zvakagadzirwa mu mainland china uye tine anopfuura 3000 marudzi eYAMATO Zvikamu zvakajairika mudura, Zvikamu zvedu mudura zvinogona kupfupisa nguva yekumirira yevatengi.
General maneja muvambi wekambani yedu, vane makore anopfuura gumi nemaviri vachitenga ruzivo mu Ningbo YAMATO.
Bhizinesi maneja, Akashanda semutarisiri wemhando yepamusoro mukambani yekune dzimwe nyika kwemakore gumi, uye aive akaomarara mukutonga kwemhando yepamusoro mu Ningbo YAMATO.
Mutengesi wekutengesa, akashanda muindasitiri yezvikamu kwemakore masere uye ane hunyanzvi hwepamusoro muzvikamu zvebhizinesi.
QC, mubhizinesi rekunze rakabatanidzwa mukuongorora kwehunhu kweanopfuura makore gumi, zvigadzirwa zvese zvisati zvasvitswa zvichaongororwa nemuongorori wemhando yepamusoro, zvisina kukodzera zvichadzoserwa kufekitori, isu tinongotumira zvigadzirwa zvepakutanga zvakanakisa kune vatengi muNingbo YAMATO.
Wekunze mutengesi maneja, Anozivikanwa nezvikamu zvekunze zvekutengeserana bhizinesi, Kuita kuti vatengi vagutsikane sechinangwa, shingairira kugadzirisa matambudziko kune vatengi.